[RASMI] dr.fone - macruufka Full Data Eraser: masax iPhone Gebi & joogto ah
dr.fone xidhmo - macruufka Full Data Eraser
Si fudud Delete All Xogta laga Your Device
Simple, riix-marayo, geedi socodka.
Your xogta si joogto ah la tirtiro.
Qofna soo kaban karo oo u eegto xogta gaarka ah.
Iibinta ama Bixinta Your Device?
Isticmaal macruufka Full Data Eraser in ay nadiifiso ka soo warbixinta qofka ugu horeeya.
Ha ogolaan in iPhone: ka tuuganimada aqoonsiga Ilaali gaarka ah
Waxaa jira habab badan oo loo raad raaco xogta jir ah iPhone / iPad loo isticmaalo, iyo 1 ka mid ah 10 waa dhibane tuugada aqoonsiga ee dunida. Masaxaadda aad iPhone / iPad jir waa waajib in aad naftaada ilaaliso.
Ha ogolaan in iPhone: Ha ogolaan in aad iPhone in jid toosan
General iPhone / iPad resetting kuma filna. Si aad u tirtiri iPhone ah guud ahaan iyo joogto, waxaad u baahan tahay jawaab qalab dhinac saddexaad xirfadeed.
Ha ogolaan in iPhone: Yaa u baahan tahay si ay u tirtiri iPhone / iPad hore?
Haddii aad weligaa galay macluumaadka bangigaaga, tirada ID, wada hadalka xasaasiga ah, iyo macluumaadka kale ee gaarka ah sida tan, waxaad u baahan tahay si ay u tirtiri aad iPhone / iPad jir ah ka hor inta aadan iska iibiso ama u bixin.
Ha ogolaan in iPhone: masax oo dhan iPhone, iPad iyo iPod taabashada
No arrinta tahay inaad la isticmaalayo iPhone ugu dambeeyay 7, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, caleemaha masaxa daaqadda this xogta iPhone si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada ..
Tani masaxa daaqadda xogta iPhone si buuxda u akhri-keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Si joogto ah masax All Xogta laga Your iPhone ama iPad
Xogta aad masixi weligiis dhammaan doonaa. Qofna, xitaa ma tuug aqoonsiga xirfad, weligiis awood u yeelan doonaan in ay soo kabtaan.
dr.fone ayaa dammaanad
Your xogta waa ammaan.
Just guji "masixi".
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ama 10.6
Sida loo masixi All Content iyo Settings on iPhone
Sida loo joogto ah Delete Content All Ka hor inta Iibinta Your iPad
Sida loo joogto ah Delete History Call on iPhone
Sida loo Delete / Messages Clear on iPhone
Sida loo Delete Taariikhda on iPhone
Xaliyo arrimaha nidaamka macruufka ah sida hab aan dhammaadka lahayn dib u soo kabashada, screen madow, dabamariyey, iwm